TOKO 10 Quote Abraham Lincoln Ho an'ny 2020 - Quotes Pedia
11 isa sy teny nolazainy
Abraham Lincoln no filoha faha-16 an'ny Etazonia. Ho fanampin'izany, dia mizaka antoka ihany koa izy ary mpisolovava ihany koa.
Nandritra ny fotoana nitondrany ho filoham-pirenena dia nitarika an'i Etazonia tamin'ny alàlan'ny ady an-trano amerikana izay heverina ho krizy politika, lalampanorenana ary fitsipi-pitondran-tena lehibe indrindra izay natrehin'ny firenena mihitsy izy.
Ary koa, nanafoana ny fanandevozana izy ary nanatsara ny toekaren'ny firenena. Nandritra ny androm-piainany dia nitaona mandrakariva ary nampahery ny olona tamin'ny alàlan'ny teniny sy ny heviny.
Andeha hodinihintsika ny sasany Quotes Abraham Lincoln. Hoy izy hoe, "Ataovy azo antoka ny fametrahana ny tongotrao eo amin'ny toerana mety, dia miorena mafy". Midika izany fa ampirisihiny ny olona rehetra hahalala izay mety sy azonao antoka ny ataony, alohan'ny hanaovany fanekena.
Rehefa nifidy sy namorona ny saintsika isika dia zava-dehibe ny miorenantsika sy hifikitra amin'ny tanjontsika. Raha miala amin'ny toerana misy antsika isika dia tsy hahatratra ny tanjontsika ary tsy hahita dikany mihitsy amin'ny fiainana.
Nilaza ihany koa izy hoe: "Mandeha tsimoramora aho, saingy tsy mandroso mankany aoriana". Amin'ny alàlan'izany dia te hilaza izy fa tsara ny mandeha miadana nefa zava-dehibe ny mahatakatra fa rehefa mandeha amin'ny fiainana isika dia tsy manao zavatra mampihemotra antsika.
Tokony ho hitantsika fa na dia kely aza ny ezaka ataontsika, dia manaraka lalana izay manakaiky antsika hahatanteraka ny tanjontsika isika.
Hafa koa manome aingam-panahy an'i Abraham Lincoln Quote hoy, "Ny fomba tsara indrindra hanombatanao ny hoavinao dia ny famoronana azy". Midika izany fa miezaka ny hamorona ny hoavinao tadiavinao. Aza miankina amin'ny hafa na ny toe-javatra hafa hamolavola ny ho avinao amin'ny fomba itiavanao azy. Ataovy tsara ny fiainanao, ka ny fiainanao no mamolavola ny hoavinao.
Teny miavaka mahavariana toy izany efa nitady olona eran'izao tontolo izao Lincoln noho ny antony manosika.
Ataovy azo antoka fa ametrahanao ny toerana tsara, ary mijoroa mafy. - Abraham Lincoln
Ny fiainana dia manary antsika amin'ny toe-javatra isan-karazany. Ny sasany amin'izy ireo dia fitsapana ary matetika dia sarotra amintsika ny…
Ny fomba tsara indrindra hananganana ny hoavinao dia ny famoronana azy. - Abraham Lincoln
Voalaza fa ny fomba tsara indrindra ahafahanao maminavina ny ho avinao dia ny…
Tsy feheziko ny handresy, voafatotra aho fa marina. Tsy feheziko hahomby aho fa feheziko miaina ny hazavana ananako. - Abraham Lincoln
Ny fiainana dia endrika tantaram-pahombiazana mifangaro amin'ny tranga tsy fahombiazana maro. Tsy maninona raha very indray…
Omeo adiny enina hikapoka hazo aho ary handany ny famaky efatra voalohany aho. - Abraham Lincoln
Ny ambaratonga fanomanana anao no mamaritra ny fahombiazanao. Marina izany! Ny miasa mafy dia azo antoka fa handoa vola anao. Ianao ...
Ny ampahany tsara amin'ny fiainany dia ny fisakaizany. - Abraham Lincoln
Tany am-pianarana dia efa nihemotra foana aho ary rehefa anio, rehefa mibanjina aho dia tsy tadidiko intsony…